Email address ပြောင်းချင်လို့ ပါ။[Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Other Problems » Email address ပြောင်းချင်လို့ ပါ။[Problem]
1 Email address ပြောင်းချင်လို့ ပါ။[Problem] on 28th January 2010, 8:42 pm
" "@gmail.com မှ " "@othername.com သို့ ပြောင်းချင် တယ် ။
2 Re: Email address ပြောင်းချင်လို့ ပါ။[Problem] on 28th January 2010, 8:52 pm
တစ်ခြားDomain name ကိုယူပေါ့ဗျာ
3 Re: Email address ပြောင်းချင်လို့ ပါ။[Problem] on 29th January 2010, 3:10 am
အကိုရေ .. အဲဒါ ကျွန်တော် ပြတဲ့လင့် က စာအုပ်ကလေးနဲ့တော့ ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ .။ စမ်းကြည့်ပါဦး။ အခြေခံကလေးပေါ့နော်.။
4 Re: Email address ပြောင်းချင်လို့ ပါ။[Problem] on 17th July 2010, 8:46 pm
omiga wrote: " "@gmail.com မှ " "@othername.com သို့ ပြောင်းချင် တယ် ။
ကျတော် အကိုမေးတာကို ဖြေပေးပါ့မယ်
ဒီနေရာလေးမှာ ပဲ [You must be registered and logged in to see this link.] ဆိုပါဆို အဲတာကို chitlaymon@domainname.co.cc
ဥပမာဗျာ chitlay.blogspot.com ကနေ nayoothit.co.cc
Domain ရသွားပီ ဆိုပါတော့ .............................. Domain နာမည်က domainname.co.cc ထားပါတော့
အဲတာဆိုရင် ...........@domainname.co.cc ဆိုပီးး အကောင့် ၅၀ free ရပါတယ်......
ပုံတွေ နဲ့ တဆင့်ချင်းရှင်းပြထားပါတယ်
'ဒီအောက်က လင့်မှာသွားပီး
အဲမှာ ပြောစရာ ရှိတာက
အဆင့် (၈) မှာ ပေါ်လာတဲ့ နေရာက စာတွေ အားလုံးကို တော့ Notepad နဲ့ မှတ်ထားလိုက်ပါ
အမှတ် ၁၂ ရောက်လို့ ရှိရင် ပြန်ထည့်ရမှာ ပါ
မှတ်လာဖို့ လိုပါတယ် အဲတာကြောင့်သေချာမှာပါတယ်နော်
အောက်ကနေရာမှာ ဖြည့်တဲ့ချိန် လိုလာမှာပါ
သေချာကြည့်ပါ နားလည်မှာပါ .................
ဒီလင့်လေးမှာ ပုံတွေ နဲ့ ရှင်းပြပြောပြထားပါတယ်
အဲလို ပဲ ဒီဖလိုးလေးတိုင်းပဲ co.cc ကို လုပ်ကြည့်ဘူးပါတယ်
ရပါတယ် ခင်ဗျာ ..........
5 Re: Email address ပြောင်းချင်လို့ ပါ။[Problem] on 17th July 2010, 9:14 pm
Co.cc Domain expires ဖြစ်သွားရင်ကော
Google Apps email က ဆက်သုံးလို့ ရမလား ဟင်
6 Re: Email address ပြောင်းချင်လို့ ပါ။[Problem] on 17th July 2010, 9:38 pm
solakoko wrote: Co.cc Domain expires ဖြစ်သွားရင်ကော
အဲတာတော့အကိုကြီး ရေ ၁ နှစ်ပဲ ရတယ် ဆိုပေ့မယ် Google Apps email ကတော့
၁ နှစ်ခွဲလောက်ရပါတယ် အကိုကြီးရေ
ညီကြုံဖူးတာကိုပြောပြတာပါ ညီကတော့ ဒီလို လုပ်လိုက်တယ် အကို ရာ blog ကနေ co.cc ကို ပြောင်း တာ အလွန်ဆုံး
၅မိနစ်ပဲ ကြာပါတယ် ............
အဲတော့ နောက်ထပ်အကောင့် (Co.cc) မှာ အကောင့်ထပ်လုပ်ပီး
Blog ကနေ Co.cc ကို ပြောင်း 48 နာရီကြာတယ် လို့ ပြောပေ့မယ်
ကျတော်က အလွန်ဆုံး ၁၅ မိနစ် ပဲကြာတယ် လို့ပဲ ပြောပါရစေဗျာ..........
Domain ရပီဆိုရင်လည်း ၂၄ နာရီပဲ ကြာပါတယ် domain အကောင့် ထပ်ရပါတယ်
ကိုကြီးမေးထားတာကိုတော့ ဖြေပေးမယ် Google Apps email ကတော့ Co.cc ပျက်သွားရင်
ဆက်ပီးတော့ မရနိင်တော့ပါဘူး ကိုကြီးရေ
ချွင်းချက် ကိုကြီးရေ နောက်ထပ် ၅ လလောက်ထိလည်း ရနိင်ပါသေးတယ်
Blog ကနေ Co.cc ကို ပြောင်း တာ အလွန်ဆုံး ၁၅ မိနစ် ပဲကြာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရတယ် ဆိုတာကို
ပြောပြချင်ပါတယ် တောင်းဆိုတဲ့ လူရှိလာခဲ့ရင်ပေါ့လေ...........
7 Re: Email address ပြောင်းချင်လို့ ပါ။[Problem] on 17th July 2010, 9:53 pm
ဒါဆိုလဲ [You must be registered and logged in to see this link.]
ဘက်မှာ လိုအပ်ချက်လေးတွေ ဖြည်ရေးပေးပါဦး
Blogging အကြောင်းလေးတွေ အားနည်းနေသေးလို့ ။
8 Re: Email address ပြောင်းချင်လို့ ပါ။[Problem]